I-Hulu vs Sling TV - Iyiphi Insiza Yokusakaza Ehamba phambili? - Amakhuphoni
Ukusika intambo sekuyinto ejwayelekile kubantu emhlabeni jikelele. Ngamazwi alula, konke kunjalo isuka ku-Cable noma i-Satellite TV kuzinhlelo zokusebenza ezidumile zokusakaza. Lezi zinhlelo zokusebenza zokusakaza zisebenzisa i-inthanethi ukukulethela ukuzijabulisa okungaphazanyiswa. Iningi lalezi zinhlelo zokusebenza linenketho yokufuna ividiyo.
Noma kunjalo, lezi izinhlelo zokusebenza zokusakaza akufani nesikhalazo sangempela se-Live TV. Akunandaba ukuthi ubukeka kanjani, abanye abantu bakhumbula ukungahleliwe kwe-Live TV kanye nenqwaba yeziteshi. Kubantu abangakwazi ukunquma ukuthi bazobukelani noma bafune ukuzijabulisa kwangemuva, i-Live TV iyindlela engcono kakhulu yokuzijabulisa.
Kulomkhakha, kusenemidondoshiya emibili esakhiqana ngezimpondo. Kulungile! IHulu ne-Sling TV zingamapulatifomu amabili avelele ongaba nakho kwe-TV bukhoma. Kulesi sibuyekezo, sizoqhathanisa iHulu neSling TV.
IHulu vs Sling TV - Ukuhambisana
Ukuhambisana kwepulatifomu kuhlobene namadivayisi atholakala kuwo. Kokubili i-Sling TV ne-Hulu ngokuyinhloko yizinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-iOS, i-Android, nezinye izinhlelo zokusebenza. Noma iyiphi i-Smart TV ingakulanda futhi ikuqalisele yona.
Ngisho neRoku, Firestick, nabanye abahlinzeki bensizakalo yokusakaza bakulethela ukungcebeleka kokusebenzisa lezi zinhlelo zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, ungazisebenzisa ngeziduduzi zemidlalo, futhi. IHulu inokutholakala okungcono kukhonsoli yemidlalo njengoba itholakala kuNintendo switchch. I-Sling TV ayitholakali kungxenyekazi yakwa-Sony, noma. Okwamanje, uHulu uhamba phambili futhi akulethele iHulu + Live TV yesikhulumi sakwaSony.
Kukonke, unebanga elingcono lokuhambisana neHulu kuneSling TV. Kodwa-ke, maqondana namadivayisi asetshenziswa kakhulu, i-Sling TV isemi endaweni esebenzayo.
Yize kuya ngohlobo lokubhaliselwe okutholayo, inani lezikrini luhlobo lokuhambisana. Kubalulekile ukufunda ukuthi zingaki izinqumo ongazisebenzisa ngasikhathi sinye ukusakaza kusuka kuhlelo lokusebenza. Ukubhaliswa kwe-Orange kwe-Sling TV kuvumela ukusakazwa kwesikrini esisodwa, futhi iphakethe lokubhaliselwe eliluhlaza okwesibhakabhaka livumela izikrini ezintathu. Okwamanje, iHulu ivumela ukusakazwa kumadivayisi amabili ngasikhathi sinye nanoma iyiphi iphakheji.
Kodwa-ke, kune-addon eyengeziwe yamadivayisi angenamkhawulo. Izokusiza ukwazi sebenzisa i-Hulu kumadivayisi amathathu eselula namadivayisi asekhaya angenamkhawulo. Nakulokhu futhi, une-Hulu njengophumelele ngokusobala ngokuguquguquka kwayo kwephakeji yokuNgeza.
IHulu vs Sling TV - Izici ezibalulekile
Iphuzu eliphelele lalezi zinhlelo zokusebenza zokusakaza ukuletha okuqukethwe okujabulisayo. Kuyindida impela ukunquma ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza olunikeza ukuthi hlobo luni lokuqukethwe. Ungabona ukukhushulwa kanye nezikhangiso eziningi kakhulu. Kodwa-ke, uHulu noSling babonakala behlanganisa indawo ebanzi.
Ake siqale ngokubheka isipiliyoni sangempela se-Live TV. IHulu + TV ebukhoma iyiphakheji yokubhaliselwe ekulethela uhla oluphelele lweziteshi ze-Live TV. Isebenzisana namanethiwekhi amaningi amakhulu njengeNBC, CBS, ABC, Fox, namanye amanethiwekhi wethelevishini. Ngakho-ke, inikeza uhlu oluheha kakhulu lweziteshi ze-TV. Ngaphezu kwalokho, unezengezo ezingeziwe zeDisney +, i-ESPN +, i-HBO, ne-Starz ukwandisa ibanga lokuqukethwe ngokuqhubekayo.
I-Sling TV ikulethela iziteshi ze-LIVE TV ezingase zingafaki ezinye zeziteshi ezithandwa kakhulu, kepha iqoqo lisesimeni esifanelekile. IneCartoon Network, i-CNN, i-FOX, i-AMC, i-Comedy Central, neminye imithombo yezindaba ekhule ithandwa uma iqhathaniswa neziteshi ze-premium zeHulu.
Ngakho-ke ngenkathi uHulu enganqoba lo mzuliswano ngezinsimbi zawo eziningi eziphoqayo, iSling TV ikulethela iziteshi ezingabizi kakhulu futhi ezijabulisayo. Unenketho yokwengeza noma ukususa iziteshi bese uzibhalisela ngokwahlukana, ngaphezu kwe-Hulu. Ngakho-ke, ukulingisa kuphethe ukuguquguquka okufanele emnyangweni.
Kungaba iphuzu eliphawulekayo ukuthi i-Hulu ayinikezeli uhlelo lwe-Live TV oluvamile ku-satellite TV nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi ze-LIVE TV. Khonamanjalo, indwayimane ikulethela amashejuli we-TV ukumaka kalula uhlelo futhi uzilungiselele ngaphambili.
Noma kunjalo, empini yamaChannel, uHulu anganqoba. Ngaphandle kokuthi ucabangele izindleko zokubhalisile. IHulu + Live TV ukubhaliswa okukodwa okukulethela inketho ye-Live TV. Kubiza kakhulu kunokuthenga kweSling TV.
Ngaphezu kwalokho, usazoba nezikhangiso nezikhangiso ezingekho ku-Sling TV. Ngakho-ke uma ungacabangi ikhwalithi yohlu ngentengo, i-Sling TV iwina kalula lo mzuliswano.
Kokubili iHulu ne-Sling TV ikulethela i-DVR esuselwa emafini ukurekhoda okuthandayo Imibukiso ye-TV futhi ama-movie okufanele uwabuke kubo. Ngaphezu kwalokho, i-Sling TV ne-Hulu zikulethela ividiyo oyifunayo. Kodwa-ke, ukutholakala kukaHulu nohlu lwayo kujabulisa kakhulu kuneSling TV.
Ngokuyinhloko ngoba iSlingTV igxile kakhulu ekunikezeni umuzwa we-Live TV. Okwamanje, uHulu usebenza njengohlelo lokusebenza olusakazwa ngokugcwele lwe-inthanethi olunenqwaba yokuqukethwe okudingwayo. Kulo mkhakha, uHulu uzowina nganoma yisiphi isikhathi.
Lokhu kubuyekezwa kwakususelwa kwikhwalithi yokuqukethwe, uhlelo, ukuzijabulisa, nokusebenziseka kalula. Akuzange kubheke izindleko zokubhalisa noma ezinye izici ezifanayo. Kukhona ireferensi, kepha isinqumo besisuselwa kuzinto zokuzijabulisa zizonke. Ngakho-ke, uHulu uzonqoba ngokumelene neSling TV.
Kodwa-ke, uma lokhu kungabheka ukuguquguquka kokukhetha iziteshi nokubhaliselwe okungabizi kakhulu, i-Sling TV izokwazi ukubamba umhlabathi wayo kakhulu. Uma ubheka isipiliyoni sangempela se-Live TV, i-Sling TV ngokuqinisekile iletha ngokuphawulekayo kulo mkhakha. Kodwa-ke, uHulu ukwazile ukuba neqoqo eliphelele lamanethiwekhi neziteshi ze-TV.
Ngokuya ngokusebenzisana nokusebenziseka kalula, i-Sling TV isenendlela ende okufanele ihambe ngayo. Vele, iHulu iyakwazi ukugcina isikhalazo sayo se-premium. Okwamanje, i-Sling TV izwa iqonde, incane, futhi ishibhile, njengezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza zamahhala ezitholakala emakethe.
Ukukubeka ngamagama alula. Uma ungakhathali ngentengo futhi ufuna ukuzijabulisa okuseqophelweni eliphezulu, khona-ke iHulu iyindlela yakho. IHulu inikeza uhla olumangalisayo lokunikezwayo, amabhonasi, izaphulelo, nokunye okuningi.
Kodwa-ke, ukuthola enye indlela ehambisana nesabelomali enohlu oluhle lweziteshi ngisho nezinsizakalo 'zamahhala', i-Sling TV ingaba ngcono, ikakhulukazi uma uyihlanganisa nezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza.
Okunye Ukuqhathanisa Ongakuthanda:
INetflix vs Hulu
I-super smash flash 2 ivulelwe i-66
https m youtube mp3 isiguquli
isoftware yomenzi wokulanda mahhala okufushane umnyuziki
i-emulator ephezulu ye-Android ye-pc
ifu lokudala le-adobe lentengo yabafundi
amakhodi bukhoma we-xbox 2016